သံမဒဂျီး သံမဒဂျီး သံမတဂျီးကိုခြစ်တယ် Love | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သံမဒဂျီး သံမဒဂျီး သံမတဂျီးကိုခြစ်တယ် Love
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 23, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 18 comments
သံမတဂျီး ဦးသိန်းစိန် စိမ်ပလိန်တိမ် မုန့်ကြိုးလိမ် တိန် ဘိန် ဂိန် ငြိမ် ကိန်… ဦးသိန်းစိန် ဦးသိန်းစိန် ဗိုလ်ချုပ် အကြီးဂျီး ဦးသိန်းစိန်.. ဧရာမဂျီး ဦးသိန်းစိန်… ဟက်ပလုပ်ကြီး ဦးသိန်းစိန်… ကြောင်ကြီးခြစ်တဲ့ ဘဂျီးစိန် ဇိမ် ဇိမ် ဇိမ်… အမေရိကန်ရောက် အစိုဒေါ် ငါးသိုင်းချောင်း ကြောင်ကြီး၏ သမဒဂျီးအတွက် သီဆိုထားသော ဂုံပြု သီချင်းသံဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်ဘုန်း မိုးသို့ချုန်းလဗျီ၊ သူ့အား ပေါက်ကရ ဝေဖန်ထားသော ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံများစွာ ထိတ်ထိတ်ပြာပြာ ဖြစ်ကုန်သည်။ အချို့က “အေဗေးကြောင်စုတ် ကြွက်မခုတ်တတ်သလိုနဲ့ ကြောင်အိမ်ထဲက ငါးကြော်ခိုးစားတာ မသိရင်ခက်မယ်ဟု” ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော် အမနာပ သွားပုပ်လေလွင့် ဝိုင်းဆဲကြ၏။ စပွန်ဆာပေးသူမှာ ကိုဘေးနွားကင်ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် ယောတောရှိ ဦးခိုင်ဖြစ်ပြီး တလောကပင် အင်္ဂလန်ရှိ ပါတနာ လတ်အရီးနှင့်ပေါင်း၍ သမဒဂျီးအား မလေးမစား ပြုသူများကို မျက်နှာလိုအားရ ဝေဖန်သမှု ပြုခဲ့သည်။ လတ်အရီးမှာလည်း အကြံနှင့်.. မြန်မာပြည်တွင် ကွန်ပြူတာပစ္စည်း အတုများ ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားသည်။ သူတော်ချင်း သတင်းလွေ့ ကြခြင်းပေတည်း။ ကြောင်ကြီးကိုမူ သမဒဂျီးအား ပြစ်မှားမိခဲ့သမျှ တေးသံဖြင့် အကြွေးဆပ်မှ ကြေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်အရေး သွေးစည်းညီညွတ်မှု ပြယုဂ်အဖြစ် လူပျိုအစစ် ကြောင်ကြီးအား ရခိုင်သမီးပျို ရတနာမိုင်လေးနှင့် အိမ်ထောင်ချထားပေးရန်ရှိကြောင်း မစားရဝခမန်း ဆွဲဆောင် စည်းရုံးထားသည်။
နွားကင်မက ဖားအကင်ပါ နာမည်ကြီးသူ ဦးခိုင်ကား ထိုမျှနှင့်အားရဟန်မတူ၊ သီချင်းနှင့်အတူ တွဲဖက်ကရန် အငြိမ့်မင်းသမီးလေး ပစ်ပစ်ချန်အား ချဉ်းကပ်လေသည်။ မှန်းချက်နှင့် နှမ်းထွက်မကိုက်၊ ပစ်ပစ်ချန်တယောက် ရတနာသိုက် မုဆိုးကျော်နူးဘာဂွီနှင့် အကြောင်းပါသွား၍ ကျိကျိတက် ချမ်းသာနေမှာ သူအလုပ်လုပ်ခဲ့သော ဂျပန်ကုမ္မဏီမှ ဂျပန်များကို လခ မတန်တဆပေး၍ ခြံစောင့်၊ မာလီ၊ ဒရိုင်ဘာများအဖြစ် ခန့်ထားနိုင်သည်အထိ ပြောင်းလဲသွားသည်။ အငြိမ့်လာငှားသော ဦးခိုင်ကိုပင် သူ့ထံစားဖိုမှူးလုပ်ရန် ပြောလိုက်သေးသည်။ ဦးခိုင်ခမျာ သူဌေးမ ပန်ပန်ချစ်ပေးသော ၂၄ကာရက်ရွှေအစစ် နာမည်ကတ်ပြားကို ဦးခေါင်းတွင်ရွက်လျက် ခါးကျိုးမတတ် တဟိုက်ဟိုက်လုပ် အရိုအသေပေး ပြန်လာရသည်။ အယင်က သူ့ထံ စာတိုပေစများပေးပို့၍ သနားသဖြင့် ရွေးပေးမှ ဘီယာသောက်နိုင်သော မောင်ဂွီအား အရိပ်ပင်တွေ့ခွင့် မရချေ။ ပန်ပန်ချစ် အပြောအရ သမဒဂျီးနှင့် ဂေါ်လီရိုက်နေကြောင်း သိရသည်။ (ဂေါက်ရိုက်ခြင်းကို နားကြားလွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်တန်ရာသည်။ ဤဂါးစကားချပ်)
“ကိုခိုင်.. အငြိမ့်မင်းသမီးကိစ္စ အဆင်ပြေရဲ့လား၊ ပန်ပန်ချစ်လေး သနားပါတယ်။ အနုပညာ အစွမ်းအစရှိပေမဲ့ ဝမ်းရေးအတွက် ဂျပန်ကုမ္မဏီမှာ ဒေါ်လာနဲ့ မလုပ်ချင်လုပ်ချင် လုပ်နေရရှာတယ်။ အခုလိုကျမတို့ တကူးတက လာငှားတာသိရင် ဝမ်းသာရှာမှာပဲ။” ခိုးကူးထားသော နောက်ဆုံးပေါ် ဝင်းဒိုးစစ်စတမ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်စီဒီချပ်များကို ပုံမပျက် တိပ်ပိတ်ရင်း Latt for Crack အင်ကုမ္မဏီ အသစ်စက်စက် ပိုင်ရှင်လတ်အရီး မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးခိုင်က ဖြစ်ရပ်မှန်ကို မပြောဘဲ ပစ်ပစ်ချန်ကို ရှာမတွေ့ကြောင်း လိမ်လိုက်သည်။ သူ့အကြံမှာ ပစ်ပစ်ချန်နှင့် မောင်ဂွီတို့မှတဆင့် သံမဒဂျီးအား ဂုဏ်ပြုတေးဂီတပွဲ ဖိတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးလျင် ငွေစာရင်းတွင် သမဒဂျီးအား ဖိတ်ကြားခ ဒေါ်လာတသိန်း ပြမည်ဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမျိုးဆိုသည်က ငွေပြေစာဖြတ်ပိုင်း လက်ခံမရှိ၊ လူကိုယ်တိုင် မေး၍လည်း မရနိုင်ချေ။ တရုတ်ကြီးအား ဝက်သားသုံးထပ်သား ကျွေးသည်ကမှ ခက်ပေအုံးတော့မည်။
လတ်အရီးကမူ သံသယမဖြစ်၊ လူတိုင်းအား သူလိုမဟုတ်ဟုပင် တွေးထင်ထားသည်၊ တနေ့တနေ့ ကွန်ပြူတာ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ခိုးကူးခွေများ ဈေးကွက်အလျင်မှီ ရောင်းချရန် စီမံစိုင်းပြင်းနေရသည်။ သူနောက်ဆုံး ကူးနေသော စီဒီမှာ သင်္ဘောပါရဂူ ဒေါက်တာအေတီဝမ်၏ ပလုံအမည်ရှိ သင်္ဘောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ယခင်ကလည်း အေတီဝမ် သင်္ဘောဒီဇိုင်းတခုကို ပုဂ္ဂလိကသင်္ဘောကျင်းသို့ ရောင်းချရာ မြိုးမြိုးမြက်မြက် ရလိုက်သည်။ တခုတော့ရှိသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမည်အား သင်္ဘောဒီဇိုင်းမှ ရေငုပ်သင်္ဘော ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ရသည်။ နို့မို့လျင် လူသေမှုဖြင့် အမှုပတ်ပေလိမ့်မည်။
ဂုံပြုဧည့်ခံပွဲကား ဖြစ်မြောက်လေပြီ။ ဂီတပွဲကို ရေပေါ်ဟိုတယ်တခုတွင် ခမ်းနားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသည်။ သမဒဂျီးအား ဦးခိုင်နှင့် လတ်အရီးတို့ ခရီးဦးကြိုဆို၍ ညစာစားပွဲဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ရော့ခ်ကာ ကြောင်ကြီးနှင့် ရတနာမိုင်လေး တဦးခါးတဦးဖက်လျက် စုံတွဲသီချင်း သီဆိုနေကြသည်မှာ ကိန္နရီ ကိန္နရာ မောင်နှံအလား ရင်တုန်သဲဖို ကြည့်ကောင်းသလို ပုရ်ှနှင့် အဆိုတော် မိုးစက်တို့၏ အလွမ်းတေးသံကလည်း ကြားရသူအပေါင်းအဖို့ လွမ်းမောဖွယ် ဖြေမဆည်အောင် ဖြစ်ကြရသည်။ အခြားဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်မှာ တရုတ်ပြည်မှ ငှားရမ်းထားသော ဓါးပေါက်ဝိဇ္ဇာ ပစ်တလွဲ ကြေးမုံဂျီးဖြစ်သည်။ သူစင်ပေါ်တက်လာသည်နှင့် ရတနာမိုင်လေးကိုပင် မစောင့်အား တချိုးထဲ ကြောင်ကြီး စင်ပေါ်မှ ဆင်းပြေးလေသည်။ သမဒဂျီးအတွက် အထူးဂုံပြုသီချင်းကား စားသောက်ပြီး ယမကာသီးသန့်အချိန်တွင် စတင်ပေမည်။
“မိတ်ဆက်ပေးရအုံးမယ်၊ ဟေ့..ဒေါက်တာအေတီဝမ်ကို ခေါ်လိုက်စမ်း” သမဒဂျီးမှ သူ့ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်မူး ဂျော်နီဝေါလ်ကားအောင်ပုအား ပြောလိုက်သည်။ အေတီဝမ်ရောက်လာသည်နှင့် “ဒါ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည် သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး တာဝန်ခံ ဒေါက်တာအေတီဝမ် ဆိုတာပဲ။” လတ်အရီးမှ ဟန်မပျက် “တွေ့ရတာ သိပ်ဝမ်းသာပါတယ်၊ ဒေါက်တာရဲ့ အောင်မြင်မှုများအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်” ဒေါက်တာအေတီဝမ်ကား သောက်ထားသော ဝိုင်တန်ခိုးဖြင့် ခိုးခိုးခစ်ခစ်ရယ်လျက် ကိုယ်ဟန်အနည်းငယ် ပျက်လျက်ရှိသည်။ ဗိုလ်မူး ဂျော်နီဝေါလ်ကားအောင်ပုကား သူ့ထံလဲပြိုလာမလား မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အေတီဝမ်ဘေးနား ရပ်ကာနေသည်။ အေတီဝမ်ကား အမူးပါး၊ အောင်ပု သူ့ဘယ်ဖက်မှာရှိလျင် ညာဖက်ယိုင်သည်၊ သူ့ညာဖက်သို့ လာရပ်လျင် ဘယ်ဖက်သို့ စောင်းသွားသည်။ ဤသို့ဖြင့် အေတီဝမ်နှင့် ဗိုလ်မူးအောင်ပုတို့မှာ ထုပ်ဆီးတိုးကစားသကဲ့သို့ ရှိနေပေသည်။
“ဂုဏ်ယူရမယ်လေ၊ အခုဧည့်ခံပွဲကို ဒေါက်တာဆောက်ပေးတဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာ လုပ်နေတာ၊ ဘယ်လောက် စက်ငြိမ်သလဲဆို သင်္ဘော ပင်လယ်ဝ သွားနေတာတောင် မသိကြဘူး မဟုတ်လား။” သမဒဂျီး စကားသံအဆုံး လတ်အရီး ခေါင်းနပန်းကြီးသွားကာ “အမလေး ကျမ ရေမကူးတတ်ဘူး သမဒဂျီးရဲ့၊ မိုက်မှားမိတာ ဗွေမယူပါနဲ့၊ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး ဒေါက်တာဂျီး၊ သင်္ဘောပြန်လှည့်ပေးပါ။” ထိုစဉ်တွင်ပင် သမဒဂျီးအတွက် ဂုံပြုတေးသံ ပျံလွှင့်လာချေပြီ။ “သမဒဂျီး သမဒဂျီး ……..” ဇတ်သိမ်းခန်းကိုမူ ဆက်လက်ရေးသားရန် အင်အားမရှိတော့ပါ၍ စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင် စိတ်ရှိသဘောရှိ ဖြည့်စွက်ဖတ်ရှုပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
ကျုပ်ကိုရော ခြစ်ဒလား …
သံမဒဂျီးကို ခြစ်တယ် ဆိုလို့ ဆက်စပ်တုံး မေးဒါဘာ ..
အပေါ်ဂ မမ ကို မေးဒါ မဟုတ်ပါဘူး ..
ဒါဂ နေရာ ဝင်ဦးဒါဘာ .. ငှဲ .. ငှဲ ..
ဟွန်း ဂုဏ်ပြုပွဲတောင် တို့လို့တန်းလန်း ထားတာ ယူထားတဲ့ငွေတွေ ဘယ်မှာသွားဘုန်းထားလဲမသိဘူး။
ရေငုပ်သင်းဘောပေါ်က ပိတ်သတ်တွေကို မှတ်တမ်းတင် ဒါ့ပုံလေး တပုံလောက်ရိုက်ထားပေးပါလား ဥကြောင်။ နောင် သတိတရ ရှိရင် ပြန်ကြည့်ပီး အတင်းတုတ် အဲလေ အလွမ်းဖြေရအောင်လို့။ ဒါနဲ့ ဥကြောင်လဲ သင်းဘောပေါ်ပါသွားဘီဆိုဒေါ့
( စကားမငရုတ် အန်တီဝေကို မထိနဲ့ . ကျုပ်လဲ မထိဘူး )
ဦးကြောင်ကြီးနော် … ဟွင်းဟွင်းးးးးးး …
မန်းဂေဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုကို အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာ ကျင်းပပစ်လိုက်မယ် … တစ်ရွာလုံးကို ဖိတ်လိုက်မယ် … မကောင်းဘူးလား ….
စားရင်းနဲ့ဖတ်နေလို့ ( မုန့် )
ရံခါ ကံတရားတို့သည်ဆန်းကျယ်လှဂျလေဂုဏ်၏ အထောက်ပန့်ကောင်းကြောင့်လည်းဆိုနိုင်ဘေသှ်။
ဗိုလ်မှူးဂျီးမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆိုသူမှာ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်
မယုံ၍ မ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အစိတ်သားခန့်အသာလေးရှိမည်ဟု တန်းပြောနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်
ဆိုခဲ့ပီးသလို ရေငုတ်သင်္ဘောလား သင်္ဘောလားဆိုရန်ခက်သော ရေတွင်သွား ( ရေပေါ်ရေအောက် )
ယန်းဒယားဂျီးမှာ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဂျီး၏ အပေါ်တည့်တည့်တွင်ရောက်ရှိသည့်အခိုက်
( ဘီဒီရိုထဲကကဲ့သို့ ကွက်တိပင်ဖြစ်၏ ဆိုသည်ကို နားလည်ဂျစေ )
ဤကိုသိသော ဗိုလ်မှူးကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောာင်ပု ( ကိုယ့်နံမယ်ကိုယ်ခေါ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ ) မှာ
လူအများ စိတ်ပြောင်းစေရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကလားပေါ်ပျူလေးရှင်းကို လော်စပီကာဖြင့်
ကလားတွေနွားကုန်ကူးတာရယ်ကို ထောက်ရှု့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကလား 98%လောက်ရှိပါတယ်လို့
လောစပီကာမှထွက်သော အက်ကိုးအသံသည် လေလှိုင်းထဲမှတစ်ဆင့် အမေဒိဂန် ဂျိုဒုရှိ
အသံဖမ်းအပြားဂျီးများဂိုထိမိပြီး အမေဒိဂန်ရုပ်သံများသို့ ဒိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မိလျှက်သားဖြစ်သွားသည်ဆိုခြင်းဂို
သမ္မဒ အိုဘားမားနှင့် ပြည်ထဲရေးလဝကများ ခေါင်းခြင်းတိုက်၍ နွားခွေ့ဒမ်းဂဂျားနေသည်မထင်ဘာနှင့်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ( ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြည်ညိုလွန်းလို့ ရာထူးတိုးပေးလိုက်ဒါ ) ၏
ပြည်နယ်တစ်ခု၏ ပေါ်ပျူလေးရှင်းကို စစ်တမ်းမကောက်ဘဲ ကိန်းဂဏန်းအတိကျဖေါ်ပြနိုင်ခြင်းသည်
( နောက်လူတွေရေးဘို့ချန်ထားလိုက်ဘာသှ် )
ကိုယ်မကျီဒဲ့လူဂို ရေထဲမှာယက်ကန်ယက်ကန်ဖြစ်နေဒုံး ငါးပူတင်းတွတ်တဲ့ဇာတ်ကွက်ကလေး
ဒီပို့ စ်ကိုဆုပေးရင် ကိုပုလည်းတဝက်ဆိုင်သနော
ကျနော်ဗိုက်တောင်အောင့် တယ် ရီရလွန်းလို့ 
အရမ်းကောင်းတဲ့ Post လေးပါ ၊ ဦးကြောင် ရေ ။
တော်ပါသေးရဲ့ ဒီတခါ အလွမ်းသီချင်းပဲ ဆိုလိုက်ရလို့
အရမ်းအရမ်းကောင်း……………………………………. ကို big cat (ကြောင်ကြီး)
အဆင်ပြေဒလို ဖတ်သွားပြီးးးအဆင်ပြေသလို ဆက်တွေးသွားးးးပါဂျောင်းးးးးး
ဦးကြောင်ရေ — ရယ်စရာ လေးတွေပါလို့ ဖတ်ရင်း ရယ်မောသွားကြောင်းပါ ။
မိုက်ရှေ့မှာ ဟစ်နေတဲ့ပုံက လန်းဒယ် ..
သမ္မတဂျီး နဲ့ ကတော့ ဘယ်သွားသွား၊ ဘာနဲ့သွားသွား မငြင်းဘူး။
ကကြောင်ကြီးရယ် Crack လုပ်မဲ့လုပ်တော့ လူပေါင်းစုံ နှိုက်နေတဲ့ ဝင်းဒိုးအစား ပန်းသီး ကိုဘဲ ဂုဏ်ရှိရှိ Crack လုပ်လိုက်စမ်းပါရစေ။
ခြောက်(ငါး+1) ကြော်ကြွေးမယ်။ ပြင်ပေးနော်။
ရော့ခ်ကာ ကြောင်ကြီးနှင့် ရတနာမိုင်လေး တဦးခါးတဦးဖက်လျက် စုံတွဲသီချင်း သီဆိုနေကြသည်မှာ ကိန္နရီ ကိန္နရာ မောင်နှံအလား ရင်တုန်သဲဖို ကြည့်ကောင်းလှသဖြင့် ဂုံပြုပွဲသီချင်းဆိုအပြီးတွင် ဖြိုးနဲ့ အောင်ပုတို့မှ ခေါ်ဆောင်သွားရာ ………..
သမဒကြီးမှ ထိုက်တန်စွာ ပြန်လည် ဂုဏ်ပြုလိုပါသဖြင့် အခေါ်တော် စေလွှတ်လိုက်သော တမန်တော်များက ကြောင်ကြီးအား ဂုံနီအိတ်အတွင်း သွတ်သွင်း၍ခေါ်ဆောင်သွားကြလေသတည်း။
နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပုံပျက်ပုံအလုံးစုံကို ဆက်လက်ရေးသားရန် အင်အားမရှိတော့ပါ၍ စာဖတ်သူများကိုယ်တိုင် စိတ်ရှိသဘောရှိ ဖြည့်စွက်ဖတ်ရှုပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
(တခါက ကြောင်ခိုးပြီး သတ်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ပုံကို အမှတ်မထင် မြင်ခဲ့ရ၍ ရေးမိပါသည်။)